Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Gaalkacyo iyo labada dhinac oo xaafadaha isla soo galay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Gaalkacyo iyo labada dhinac oo xaafadaha isla soo galay (SAWIRO)
Wararka ugu dambeeyay ee laga helaayo dagaalka maanta ka soconaaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaalkaasi xoogiisa uu haatan kusii fiday qeybo ka mid ah magaaladaasi, iyadoona weli la maqlaayo hubka culus iyo sidoo kale rasaas goos goos ah oo dhaceeysa.
Dagaalkaasi oo u dhaxeeya ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa markiisii hore ka bilaawday galbeedka magaalada Gaalkacyo, waxaana markii dambe la isla soo galay gudaha magaalada, iyadoona labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka cul-culus, kaas oo saameyn aad u balaaran ku yeeshay xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaas.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay ilaa 20 qof oo isugu jira dad shacab iyo askar ka kala tirsan labada dhinac, waxaana sidoo kale ku dhaawacantay tiro intaas ka badan.
Xarumaha caafimaad ee ku kala yaala magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Koonfurta iyo Waqooyiga ayaa maanta la gaarsiiyay meydadka iyo dhaawacyada ciidanka labada dhinac iyo sidoo kale dad shacab ah.
Dhinaca kale, xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa maanta ah mid aad u kacsan, waxaana ciidamada Galmudug iyo Puntland la sheegayaa inay kala qabsadeen gawaari dagaal iyo hub, iyagoona la sheegayo inay ciidankaasi weli ku hardamayaan gudaha magaaladaas.
Ilaa iyo haatan ma jirto wax horumar muuqda oo uu midkood dagaalkaasi ka gaaray, marka laga soo tago khasaaraha nafeed iyo maaleed uu dagaalkaasi geystay.
Si kastaba oo ay ahaataba, maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa inta badan midba midka kale ku eedeeya jabinta heshiiskii dhawaan lagu gaaray magaalada Abuu Dhabi ee dalka Imaaraatka Carabta, waxayna labada dhinac ku doodayaan in dagaalka isaga lagu soo qaaday.